पारश र सोनिकाको नयाँ भिडियो भाईरल, सोनिकालाई दिए हिराको हार ! (भिडियो) - Sidha News
पारश र सोनिकाको नयाँ भिडियो भाईरल, सोनिकालाई दिए हिराको हार ! (भिडियो)
काठमाडौं। चर्चित युट्युब च्यानल वाऊ नेपालको संचालिका, भिजे एवं मोडल सोनिका रोकाया आइतबार २५ वर्ष लागेकि छिन् । फेब्रुअरी १६, १९९५ मा बझाङमा जन्मिएकि सोनिकाले आफ्नो जन्मदिनको विशेष भिडियो युट्युबबाट सार्वजनिक गरेकि छिन् । उक्त भिडियोमा युर्वयुवराज पारश शाह हसिलोमा मु द्रामा देखिएका छन् । सोनिका र पारशले एकआपसमा चु म्ब न गरेको क्लिप भिडियोमा देख्न पनि सकिन्छ । उक्त भिडियोमा पारशले सोनिकालाई हिराको हार गिफ्ट दिएका छन् । पारशले गिफ्ट दिनासाथ सोनिकाले उक्त हार गलामा लगाएकि थिइन् । उक्त भिडियोमा सोनिकाको अन्दाजनै फरक देखिन सकिन्छ । आफैँलाई सम्हा ल्न नसकिएको जस्तो दृश्यहरु भिडियोमा थुप्रै देखिएका छन् ।
उनकै नाममा प्रोफाइल तस्बिर..
समाजिक संजाल फेसबुकमा पारशले आफ्नो प्रोफाइल तस्बिर नै सोनिका रोकायासँग राखेका छन् । केहि समयअघि सोनिका र पारशको नि कट ताले व्यापकता पाउँदा पारशले सोनिकासँगको तस्बिर फेसबुकमा हालेका थिए । पारशको आधिकारीक फेसबुकको पुष्टि नभएपनि पारशलेनै उक्त फेसबुक एकाउन्ट चलाउने गरेको बुझिएको छ ।
सोनिकाको बर्थडेमा म्व ई, पारशकोमा टिकटक
केहि समयअघि पारशको जन्मदिनमा पोखरामा व्यस्त देखिएकि सोनिकाले बिहानै टिकटकमा पारशसँगको भिडियो सार्वजनिक गरेकि थिइन् । पारशले समाजिक संजालमा बधाई नदिएपनि बर्थडे साँझमा सोनिकालाई अं गा लेर कि स भने दिएका छन् । हसिलो मुद्रामा बर्थडे पार्टीमा देखिएका पारश सोनिकाको हरेक गतिविधिमा रमाइरहेका थिए । सोनिकाले पनि पारशलाई विशेष महत्व दिएकि थिइन् । उनले पहिलो केकनै पारशलाई ख्वाएकि थिइन् । केक का ट्नु अघि भने सोनिकाले पारशलाई म्वा ई खाएको सजिलै देख्न सकिन्छ ।
सम्ब न्ध बारे गन्थ न
पूर्वयुवराज पारस शाह र युट्युबर सोनिका रोकायको सम्बन्धलाई लिएर केहिसमय अघि मिडिया ता त्नु सम्म ता त्यो । सामाजिक सन्जालमा उनीहरुका विषयलाई लिएर अनेक थरिका टि का टिप्प णी भए । दरबारमार्गको एक क्लबमा अ गं माल गरेको तस्बिर, एक होटलमा सोनिकाले बनाएको टिकटक, पोखरामा खिचिएको एउटा भिडियोपछि उनीहरु निकै नि कट रहेको चर्चा भयो ।
परिवारबाट बहि ष्का रमा परेकी युट्युबर हुन्, सोनिका । केहि समयअघि उनले कान्तिपुर पव्लिकेशन्सका इन्टरटेनमेन्ट जर्नालिस्ट रामजी ज्ञवालीसँग आफुलाई परिवारले निकै घृ णा गर्ने गरेको र विदेशमा रहेका दाईले समेत कहिल्यै बहिनीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार नगरेको बताएकी थिइन् । आफ्नो लोकप्रियतासँगै परिवारले आफुलाई प्रेम गर्न थालेको ज्ञवालीसँगको भेटमा बताएकी थिइन् । उक्त समयमा सोनिकाले आफु स मलि ङ्गी भएकाले कोहि युवासँग प्रेममा नरहेको समेत बताएकी थिइन् । उनले दिएको जवाफ ज्ञवालीले ‘कान्तिपुर साप्ताहिक’ मा प्रकाशित समेत गरेका थिए ।
तर, उनी स म लि ङ्गी भएको खवर गलत थियो । किनभने यसअघी उनको प्रे म चर्चा चल्दै आएको थियो । उनले आफैले निर्देशक सोभित बस्नेतसँगको प्रे ममा रहेका बताएकी थिइन् । त्यसपछि दिएको इन्टरभ्युमा आफु स म लि ङ्गी भएको जवाफ दिएकी थिइन् ।
सोनीका आफुले भनेको कुरा समेत खासै हेक्का राख्दिनन् । के बोलें समेत उनले मतलव नराख्ने गरेका कारण उनी वि वाद मा पर्दै आएकी हुन् । निकै खटेर काम गरेपनी हे क्का नराखि काम गर्दा उनी वि वाद मा तानिदै आएकी छिन् ।
लामो समयदेखि पत्नी हिमानीसँग सम्बन्ध वि ग्रि एपनि पारश शाहको पछिल्लो समय श्रीमतीसँग नि क ट रहेको बताइएको थियो । तर, ‘नानी देखि लागेको बानी कहिँ नजाने’ जस्तै भएको छ । केटी देखेपछि म रि हत्ते गर्ने पारश पछिल्लो समय सोनिकासँगको सम्बन्धमा चु र्लु म्म डु बे को चर्चा छ ।
उनीहरुको निकटतालाई लिएर सामाजिक सन्जालमा गा ली को बर्षा भैरहेको छ । एकथरिले ना ना थरिका भिडियो र तस्विर बाहिर ल्याएर पुर्वराजपरिवारको इज्जतमा दा ग लगाउन खोजेको सोनीकामाथि आ रो प लागेको छ । कतिपयले हिमानी जस्तो सुन्दर श्रीमतीलाई छाडेर विभिन्न युवतीको च क्क र मा जालमा परेर आफुलाई ब र्बाद हुँदै लगेको भन्दै पारश शाहमाथि गा ली लाग्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय जे–जे भैरहेको छ यस विषयमा सोनिकाले भने एउटा उपर्युक्त समय आएपछि छ र्ल ङ्ग पार्ने जवाफ दिएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो सम्बन्ध बाहिर भएको हल्ला जस्तो होइन, हामी नजिकका साथी हौं । बाँकी कुरा पछि समय आएपछि जवाफ दिनेछु ।’
हाल आफुहरुलाई लिएर समाजिक सन्जालमा मजाक बनाइएको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिले जति बोलेपनि कसैले बुझ्नेवाला छैन, यस विषयमा म पक्कै बोल्नेछु, जसले धेरैलाई बुझ्न बाध्य पार्नेछ ।’ सोनिकाले आफुहरुलाई नबुझेर ना ना थरिका ह ल्ला फैलाइएको भन्दै यसले प्रत्यक्ष रुपमा आफुहरुलाई त ना बमा पारेको बताएकी छिन् ।
पारशको समर्थनमा सधैँ सोनिका
पुर्वयुवराज पारश शाह ग ल त कामका कारण चर्चामा रहिरहन्छन् । विमानस्थलमा पारशले प्रहरीमाथि गरेको दु व्र्य व हा रको चर्चा चल्यो । उनले छोरा हृदयन्द्रको अनुहारमा प्रहरीको ड ण्डा देखेपछि होश गु मा एको समाजिक संजालमा बताएका थिए ।
यसअघि पनि ट्राफिक प्रहरीलाई दु व्र्य वहार गरेका थिए । शाहको उ दण् ड व्यवहार जतिनै सार्वजनिक भएपनि उनलाई कानुनले नछोएको प्रतिक्रियाहरु आएको छ । पारशको छवि सुध्रेको समाचारहरु नआउँदै उनको झ ग डा सार्वजनिक हुने गरेको छ । कहिले ट्राफिक प्रहरीमाथि नै गाडी कुदाउन खोज्ने त कहिले ड्युटिमा रहेका प्रहरीलाई ध के लेको घ ट्ना सार्वजनिक भएपछि पारश वि वा दमा तानिएका हुन् ।
उ दण् ड स्वभावका पारश क्लबमा भने खुलेको देखिन्छन् । केहि पहिला मोडल सोनिका रोकायाको संयुक्त तस्बिर समाजिक संजालमा भा इरल नै बनेको थियो ।
काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको लिक्वीड लाउञ्ज एण्ड बारको संचालक समेत रहेकि रोकायासँग पूर्वयुवराज पारस शाहको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि निकै न का रत्मक कमेन्ट आए । पछिल्लो समयमा उनमा आध्यात्मिक बन्ने रहर जागेको पनि उनी निकटका श्रोतले बताएका थिए । तीनपटक हृ द य घा त भइसकेको पारशको पारिवारिक सम्बन्ध अहिले भने राम्रै देखिन्छ ।
थाइल्याण्डबाट फर्केपछि उनलाई बुवा ज्ञानेन्द्रले स्विकारेका थिएनन् । तर अहिले भने राजधानीका नाइट क्लबहरुमा पुर्वराजपरिवारको जमघट देखिने गरेको छ । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै बसेको तस्बिरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
‘बाघ जहिले नि बाघ नै हुन्छ, जहाँ पनि गर्ज ने क्षमता राख्छ । बिरालो सम्झेर बाघलाई जिस्क्याउने चेष्टा नगरे हुन्छ ।’पुर्वयुवराज पारस शाहलाई मोडल सोनिका रोकाया ‘बाघ’ सम्बोधन गर्छिन् । त्रिभुवन विमान स्थलमा प्रहरीलाई चेकजाँचका क्रममा हा त पा त गरेपछि पारस वि वा दमा तानिए ।
पारसलाई समर्थन गर्दै सोनिकाले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
उक्त पोस्ट सहितको तस्बिरमा भने सोनिका डमरुसर बाघको अँगालोमा देखिन्छिन् । उनी बाघका दुई प ञ्जा ले घे रि एकी छन् । अब डमरुलाई बाघको पञ् जा सँग केको डर ?
म नेपालीहरुलाई बचाउन कोरोना भाईरसको औषधी फ्रिमा दिन्छु (भिडियो)
‘पल र मेरो विहे नभएनि ‘आँप’ जोडि सधै रहन्छ’ – आँचल
१६ लाखको लेहेंगा, ६० लाखको गहनामा सजिएकी आँचल (भिडियो)